Hirarkii ugu kululaa ee Spain | Saadaasha Shabakadda
El xagaaga inta badan waa xilli dad badani rajaynayaan. Waxaa jira 90 maalmood oo ay qorraxdu kugu casuuntay inaad maalin ku qaadato xeebta si aad maalinta u joogto, ama aad ugu baxdo socod. Sidoo kale waa waqtigii nasashada, fasax la aadin lahaa ama in yar laga jari lahaa hawl maalmeedka. Laakiin nasiib daro mararka qaar heer kulka ayaa aad u sarreeya oo lagu raaxaysan karo xilliga ugu kulul sanadka.
Halkan waxaan kuugu sheegeynaa waxa mowjadihii kuleylka ee ugu xumaa Spain ilaa hada waa jirtay.
1 Waa maxay hirarka kuleylka?
2 Hirarkii ugu darnaa ee Isbaanishka
Waa maxay hirarka kuleylka?
Markii aan ka hadlayno mowjadaha kuleylka, waxaan tixraaceynaa ugu yaraan 3 maalmood oo heerkulku, ugu badnaan iyo ugu yaraan, uu si aan caadi ahayn uga diiwaan gashan yahay ugu yaraan 10% saldhigyada saadaasha hawada. Waxaa jira afar heer oo kala duwan:
Verde: marka aysan jirin khatar caafimaad.
Amarillo: haddii heerkulku ka sarreeyo sida caadiga ah, hirarka kuleylku waxay khatar ku noqon karaan gaar ahaan carruurta, carruurta, dadka ka weyn 65 sano iyo kuwa qaba cudurrada daba dheeraada (sonkorowga ama dhiig karka).
Orange: marka heerkulku sarreeyo dhowr maalmood, oo saameeya kooxaha halista ah.
Rojo: markay saameyn ku yeelan karto dadweynaha oo dhan, xitaa kan caafimaadka qaba. Waa kiisas aan caadi ahayn.
Midka liiska ugu sarreeya waa kan laga soo bilaabo 2015. Waxay ahayd tii ugu dheereyd ee la diiwaangeliyo illaa 1975, oo leh muddo 26 maalmood, laga bilaabo Juun 27 ilaa July 22. Maalintii ugu kululayd waxay ahayd July 6, with 37,6ºC, waxayna saameyn ku yeelatay 30 gobol 15-kii July.
Xagaagaas wuxuu ahaa mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee soo maray Spain iyo Yurub guud ahaan. Wadankii ugu horeeyey, kuleylka ayaa socday intii u dhaxeysay July 30 ilaa August 14, wuxuuna saameyn ku yeeshay 38 gobol Agoosto 3, 4 iyo 9 Celceliska heerkulka waddanku wuxuu ahaa 24,94ºC.
Sanadkaas waxaa la arkay waa maxay sedexaad mowjadaha kuleylka ugu muhiimsan. Wuxuu socday Agoosto 8 ilaa 11 wuxuuna saameeyay 40 gobol. Maalintii ugu kululayd waxay ahayd Agoosto 10, oo leh heer kul 39,5ºC.
Mawjadaha kuleylka waa astaamaha saadaasha hawada oo saameyn ku yeelan kara kumanaan iyo xitaa malaayiin dad ah. Xusuusnow inaad markasta biyo sidato si aad uga fogaato fuuqbaxa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Mawjadaha kuleylka » Hirarkii ugu darnaa ee Isbaanishka